ဖောက်ပြန်ပျက်စီးနေသော လူသားမျိုးနွယ်သည် လူ့ဇာတိခံ ဘုရားသခင်၏ ကယ်တင်ခြင်းကို ပို၍လိုအပ်သည် (ကောက်နုတ်ချက် ၄) | နိုင်ငံတော်သက်ဆင်းကြွရောက်ခြင်း၏ ဧဝံဂေလိတရားတော်
လူသားသည် စာတန်၏ဖျက်ဆီးခြင်းကို ခံခဲ့ရပြီး သူသည် ဘုရားသခင်၏ ဖန်ဆင်းမှုအားလုံးထဲ၌ အမြင့်ဆုံးအရာဖြစ်သဖြင့် လူသားသည် ဘုရားသခင်၏ ကယ်တင်ခြင်းကို လိုအပ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ ကယ်တင်ခြင်းခံရသူသည် လူသားဖြစ်ပြီး စာတန် မဟုတ်ပေ။ ကယ်တင်ခြင်းခံရမည့်အရာမှာ လူသား၏ ဇာတိခန္ဓာနှင့် လူသား၏စိတ်ဝိညာဉ်ဖြစ်ပြီး နတ်ဆိုးမဟုတ်ပေ။ စာတန်သည် ဘုရားသခင်၏ သုတ်သင်ခြင်း ခံရမည့်အရာဖြစ်ပြီး၊ လူသားသည် ဘုရားသခင်ကယ်တင်မည့် အရာဖြစ်သည်။ လူသား၏ ဇာတိခန္ဓာကို စာတန်က ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးဖြစ်၍ ပထမဆုံး ကယ်တင်ရမည့်အရာမှာ လူသား၏ဇာတိခန္ဓာပင်ဖြစ်သည်။ လူ့ဇာတိခန္ဓာသည် အများဆုံး အကြီးအကျယ် ဖျက်ဆီးခြင်း ခံခဲ့ရပြီး ယင်းသည် ဘုရားသခင်ကို ဆန့်ကျင်သည့်အရာ ဖြစ်လာကာ ဘုရားသခင်၏တည်ရှိမှုကို ပို၍ပင်ပွင့်လင်းစွာ ဆန့်ကျင်၍ ငြင်းဆန်သည်။ ဤဖောက်ပြန်ပျက်စီးနေသော ဇာတိခန္ဓာသည် ပြောင်းလဲရန် အလွန်ပင်ခက်ခဲလှပြီး ဇာတိခန္ဓာ၏ ဖောက်ပြန်ပျက်စီးနေသော စိတ်သဘောထားကို ကိုင်တွယ်ရန် သို့မဟုတ် ပြောင်းလဲရန်လောက် ခက်ခဲသည့်အရာမရှိပေ။ စာတန်သည် လူ့ဇာတိခန္ဓာထဲသို့ နှောင့်ယှက်မှုများဖြင့် ဂြိုလ်မွှေရန် ဝင်ရောက်လာပြီး ဘုရားသခင်၏ အမှုကို နှောင့်ယှက်ရန် လူ့ဇာတိခန္ဓာကို အသုံးပြုကာ ဘုရားသခင်၏ အစီအစဉ်ကို ထိခိုက်စေခဲ့သဖြင့် လူသားသည် ဘုရားသခင်၏ရန်သူ၊ စာတန်ဖြစ်သွားသည်။ လူသားသည် ကယ်တင်ခံရရန်အတွက် သူသည် ပထမဆုံးအနေဖြင့် သိမ်းပိုက်ခြင်းခံရမည်။ ဤအကြောင်းကြောင့် ဘုရားသခင်သည် စိန်ခေါ်မှုအတွက် ကြွလာကာ သူပြုလုပ်ရန် ရည်ရွယ်သော အမှုကိုပြုရန် လူ့ဇာတိခံယူပြီး စာတန်ကို တိုက်ပွဲဝင်ခြင်းဖြစ်သည်။ သူ၏ရည်မှန်းချက်မှာ သူ့ကို ဆန့်ကျင်ပုန်ကန်သောစာတန်ကြောင့် ဖောက်ပြန်ပျက်စီးကာ ကျရှုံး၊ ပျက်သုဉ်းခဲ့ရသောလူသားမျိုးနွယ်ကို ကယ်တင်ရန်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် လူသားကို သိမ်းပိုက်သည့် သူ၏ အမှုအားဖြင့်စာတန်ကို အနိုင်ယူကာ တစ်ဆက်တည်းတွင် ဖောက်ပြန်ပျက်စီးနေသောလူသားမျိုးနွယ်ကို ကယ်တင်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်သည် တစ်ကြိမ်တည်းနှင့်ပြဿနာနှစ်ခုကို ဖြေရှင်းလေသည်။ လူသားနှင့် ပို၍ကောင်းစွာ ဆက်သွယ်နိုင်ရန်နှင့် လူသားကို ပို၍အောင်မြင်စွာ သိမ်းပိုက်နိုင်ရန် သူသည် ဇာတိခန္ဓာနှင့် အလုပ်လုပ်သည်၊ ဇာတိခန္ဓာနှင့် စကားပြောသည်၊ ဇာတိခန္ဓာနှင့် အမှုအားလုံးကို ပြုသည်။ ဘုရားသခင် နောက်ဆုံးအကြိမ် လူ့ဇာတိခံယူချိန်၊ နောက်ဆုံးသော ကာလ၏ သူ့အမှုကိုဇာတိခန္ဓာနှင့် နိဂုံးချုပ်ပေလိမ့်မည်။ သူသည် လူသားအားလုံးကို အမျိုးအစားအလိုက်ခွဲခြားပြီး၊ သူ၏ စီမံခန့်ခွဲမှုတစ်ခုလုံးကို အဆုံးသတ်ကာ ဇာတိခန္ဓာ၌ရှိသည့် သူ့အမှုအားလုံးကိုလည်း နိဂုံးချုပ်လိမ့်မည်။ ကမ္ဘာကြီးပေါ်မှ သူ၏အမှုအားလုံးသည် အဆုံးသို့ရောက်ချိန်တွင် သူသည် အပြည့်အဝ အောင်နိုင်မှုရလိမ့်မည်။ ဇာတိခန္ဓာနှင့် အလုပ်လုပ်ခြင်းဖြင့် ဘုရားသခင်သည် လူသားမျိုးနွယ်ကို အပြည့်အဝ အောင်နိုင်ကာ အပြည့်အဝ သိမ်းပိုက်ရယူပြီး ဖြစ်လိမ့်မည်။ ယင်းသည် ဘုရားသခင်၏ စီမံခန့်ခွဲမှုတစ်ခုလုံးမှာ အဆုံးသို့ရောက်မည်ကို ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်လော။ ဘုရားသခင်သည် သူ၏ အမှုကို ဇာတိခန္ဓာဖြင့် အဆုံးသတ်သောအခါ စာတန်ကို သူသည် အပြည့်အဝအနိုင်ယူကာ အောင်နိုင်သဖြင့် စာတန်သည် လူသားတို့ကို ဖျက်ဆီးရန်နောက်ထပ်အခွင့်အရေး ရနိုင်တော့မည်မဟုတ်ပေ။ ဘုရားသခင်၏ ပထမလူ့ဇာတိခံယူခြင်း၏ အမှုသည် လူသား၏ အပြစ်များကိုခွင့်လွှတ်ခြင်းနှင့် ရွေးနုတ်ခြင်းတို့ ဖြစ်သည်။ ယခုတွင်မူ လူသားမျိုးနွယ်ကို သိမ်းပိုက်ခြင်းနှင့် အပြည့်အဝ ရယူခြင်း၏ အမှုဖြစ်သည်။ သို့မှသာ စာတန်သည် ၎င်း၏အလုပ်ကို ထပ်လုပ်ရန်လမ်းမရှိတော့ဘဲ လုံးဝဆုံးရှုံးကာ ဘုရားသခင်သည် အပြည့်အဝ အနိုင်ယူပြီး ဖြစ်လိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ ယင်းသည် ဇာတိခန္ဓာ၏အမှုဖြစ်ပြီး ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်မှ လုပ်ဆောင်သောအမှု ဖြစ်သည်။
God Incarnate in the Last Days Ends God’s Management
God works in the flesh and speaks in the flesh, to better engage with and conquer man. When God first became flesh, He redeemed and forgave man’s sins. Now it’s the work of conquering and gaining mankind. The last time God becomes flesh, He’ll finish the work of the last days and classify all men according to their kind. He’ll end His management, all His work in the flesh. After His work on earth ends, He’ll be victorious.
When God in flesh has fully conquered and gained man, won’t this mean His management will have ended? When God ends His work in flesh and reigns victorious, Satan is defeated with no chance to corrupt man. This is the work, the work of the flesh done by God Himself! The last time God becomes flesh, He’ll finish the work of the last days and classify all men according to their kind. He’ll end His management, all His work in the flesh. After His work on earth ends, He’ll be victorious. The last time God becomes flesh, He’ll finish the work of the last days and classify all men according to their kind. He’ll end His management, all His work in the flesh. After His work on earth ends, He’ll be victorious, victorious, victorious.